Guddiga Fulinta Xisbiga DDS oo go’aanshay diidmo EPP Xisbiga cusub ee Abiy Axmed – Radio Daljir
Guddiga Fulinta Xisbiga DDS oo go’aanshay diidmo EPP Xisbiga cusub ee Abiy Axmed
Nofeembar 26, 2019 2:06 b 0
Maamulka Dowlad Deegaanka Soomaalida (DDS) xubnihiisa Guddiga Fulinta Xisbiga SDP ayaa go’aan ku soo saaray in aanay oggolayn ku biirista ama kamid ahaanshaha xisbiga cusub ee Dowladda Federaalku aasaastay, loona soo gaabiyo EPP ama ‘Ethiopian Prosperity Party.”
RW Abiy Axmed ayaa ka danbeeya hal-abuurka EPP ayada oo qorshuhu yahay in la mideeyo ururada uu ka koobanyahay xisbiga talada haya ee EPRDF oo awal ahaa jirey afar urur oo kaliya, kuna ballaariyo dalka oo dhan.
Xisbigan cusub ee EPP ayaa waxaa aad u saluugsan kililka Tigrayga, waxaana hadda gacantaag ku diidey Xisbiga deegaanka Soomaalida, sheegayna in go’aanka ku biirista xisbiga uu yahay mid u taal shacabka Dowlad Deegaanka Soomaalida oo Xisbigu aanu kali go’aan ka gaadhi karin.
Xisbigii hore ee EPRDF ayaa hore uga koobnaa xisbiyada ama ururada afar KILIL oo kaliya oo ay ugu horreyn jireen kililka Tigreyga, Raysal Wasaaraha dalkuna waxa uu ka soo bixi jirey afartaas kilil mid kamid ah oo kaliya.
Xisbiga cusub ee EPP ayaa hadda hiigsanaya in uu noqdo xisbi ay ku midoobaan qowmiyadaha Itoobiya oo dhan. Saas oo ay tahayna waxaa aad loo saluugsanyahay xeer hoosaadada xisbiga EPP oo qoraya in KILIL kasta oo Itoobiya uu madax ka noqon karo qof aan kililka ama gobolka u dhalan, oo qof ka soojeeda kililka Amxaarada, Tigreega ama Oromadu uu madax ka noqon karo kililka Soomaalida ama kilil kasta oo Itoobiya.
Dowlad Deegaanka Soomaalida 216 Wararka 20742
Deegaanka Dhaakhato ee degmada Gursum oo weli jid la’a